Shiinaha aluminium aluminium-YA103 soosaarayaasha iyo shirkado | Yingjiwei
Noocyada guddiga aluminium
3. Aluminium waa ductile oo wuxuu leeyahay dhibic yar oo dhalaalaya, Waxay noo ogolaaneysaa inaan si fudud u sameysano aluminium aluminium ah shuruudaha mashruuca. Waxaa looga baaraandegi karaa qaabab murugsan sida naqshadaynta
6. Ku habboon rakibidda. Qalabka aluminium ee darbiga aluminium waxaa lagu farsameeyay warshadda waxaana lagu dhejiyay qaab dhismeedka iyada oo aan la jarin goobta dhismaha.
Aluminiumka aluminium wuxuu inta badan ka kooban yahay guddi, adkaha, geeska aluminium iyo qaybo kale. Waa nooc ka mid ah qalabka qurxinta dhismaha, kaas oo u adeegsada saxan aluminium tayo sare leh alaabada asalka ah, ka dibna u gudba dhumucda loo habeeyay, cabirka iyo qaababka adag ee lagu daaweynayo dusha sare, dusha sare ee fluorocarbon ayaa ah xulashada mudnaanta leh. Nidaamka rinjiyeynta ayaa guud ahaan loo qaybiyaa labalaab, saddex daahan ama afar daahan. Daawada Fluorocarbon waxay leedahay caabbinta daxalka iyo u adkaysiga cimilada, waxay iska caabin kartaa roobka aashitada, buufinta milixda iyo wasakhda hawada ee kaladuwan, qabow aad u fiican iyo kuleyl iska caabbin, waxay iska caabin kartaa shucaaca xoogga leh ee ultraviolet, waxay sii wadi karaan muddada-dheer oo aan sii dhammaanayn, aan lahayn budo, iyo adeeg dheer.
Magaca badeecada Qalabka Aluminium
Shayga No. YA103
Daaweynta dusha sare Dahaarka PVDF / Dahaarka budada / daabacaadda Anodized / UV, emobssing
Midab Midab kasta oo RAL ah, midabbo adag, midabbo macdan ah, hadhuudh alwaax ah, marmar ku dayasho iyo dhagax